Tuesday .7July . 2020
အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်တစ်ချောင်းနဲ့ အတူ ဘဝတစ်ခုပါ ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားရတဲ့ ပုသိမ်မြို့ လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှန်
(၁၁.၁၁.၂၀၁၉) ည ၁ဝနာရီခန့်တွင် ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ ကိုးဆူ တံတားထိပ် လယ်ကွင်းတွင်အလောင်း တစ်လောင်းပစ်ထားခဲ့သည်ဟု (၁၂.၁၁.၂၀၁၉)နံနက်အဖမ်းခံသည့်တရားခံ ထံမှ ဝန်ခံသတင်းရရှိပြီး ရဲနှင့်ပြည်သူဝိုင်းဝန်းရှာဖွေကြရာ မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်တွင် အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်း လယ်ကွင်းအတွင်းတွေ့ရှိ ရကြောင်းသိရသည်၊
ဖြစ်စဉ်မှာ ပုသိမ်မြို့မရဲစခန်း၌ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉.ရက်နေ့လည်(၁၂)နာရီအချိန် ဒုရဲအုပ်မျိုးမင်းဦး တာဝန်မှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဂ်လာဒုံ မြို့မရဲစခန်း မှ ဖုန်းဖြင်.ဆက်သွယ်၍ ဇော်နိုင်ဦး (၂၈)နှစ်၊(ဘ)ဦးရွှေလင်း ညောင်တုန်းမြို့မှ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မဝိုင်းအုံချစ် အသက်(၂၃)နှစ် ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာ နေသူအားသတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြီး ၎င်း၏အုပ်ထိန်းသူများကအပ်နှံလာရောက်အဖမ်းခံနေကြောင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
တာဝန်မှူးမှစခန်းမှူး မှဒုရဲမှူးမြင့်ခင်ထံ ဆက်လက်သတင်းပို့ပြီး သတင်းရရှိသောနေရာသို့ စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခေါင်းဆောင်၍ တာဝန်မှူး နယ်ထိန်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးကြပြီး လူမှုကူညီရေးပရဟိတ အဖွဲ့ တို့၏ကူညီမှုဖြင့် ရဲဆေးစာနှင့်အတူပုသိမ် ပြည်သူ ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
တရားခံအားသွားရောက်လွှဲပြောင်းလက်ခံ၍ပုသိမ်မြို့သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး အမှုစစ်အဖွဲ့ကစစ်ဆေးကြရာ ၎င်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မဝိုင်းအုံချစ်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ‘(၅)လခန့်က စ၍ အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြကြောင်း ၎င်းနှင့်အိမ်ထောင်မပြုခင် ပထမ အိမ်ထောင်ရှိကြောင်း
ထိုသို့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြရင် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁)လက (ဖောင်ကြီး) သို့သွားရောက်သင်တန်းတက်နေစဉ် ဇနီးဖြစ် သူမှာ ယခင် ခင်ပွန်းဟောင်းဖြင့် ပြန်လည်ပေါင်းသင်းနေကြောင်း ကြားသိ့ရသည့်အချိန်မှစ၍ စိတ်မကောင်း မနေကြောင်း ၁၀.၁၁.၂၀၁၉.ရက်နေ့မှာ သင်တန်းက ခွင့်တိုင်ပြီး ပုသိမ်ကိုလာခဲ့ကြောင်း
၁၁.၁၁.၂၀၁၉.နံနက်(၇)နာရီ အချိန် ကင်မလင်းကျွန်း အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာဆုံကြပြီကယ်ရီ ဖြင့် ကန်သုံးဆင့်ကိုသွားခဲ့ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူအား ၎င်းနှင့်အတူလိုက်ခဲ့ရန်‌ပြောဆို ခဲ့ရာ မလိုက်နိုင်ကြောင်းငြင်းဆန်၍စကားများကြကြောင်း
ထို့နောက် ဆိုင်ကယ် တက္ကစီနဲ့ ကိုးဆူဘက်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး ကိုးဆူဂိတ်အရောက် မှာ ဆိုင်ကယ်Taxiအားပိုက်ဆံပေးပြန်လွတ်လိုက်ကြောင်း လယ်ကွင်းအနီး မလေးရှားပိတောက်ပင်အောက်မှာ တွေ့ဆုံကြပြီး စကားဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရာ မလိုက်နိုင်ကြောင်းထပ်မံပြောသဖြင့်
၎င်းက ဘယ်လိုက်ပါ့မလဲ မင်းက အရင်အိမ်ထောင်အားကိုးရှိနေတာကိုး စွပ်စွဲပြောဆိုရာ ပြန်လည်ပြောဆိုငြင်းဆန်နေ၍ ဒေါသဖြစ်ပြီး လည်ပင်းအားညှစ်လိုက်ကြောင်း လဲကျသွားစဉ် အနီးရှိ မလေးရှားပိထောက်ကိုင်းဖြင့်ဇနီးဖြစ်သူ၏ဦးခေါင်းအားရိုက်ခဲ့ကြောင်း ရိုက်ခဲ့ပြီး ကြုံရာကားဖြင့် မိဘများရှိရာမဂ်လာဒုံကိုပြန်လာခဲ့ပြီး မိသားစုများအားပြောပြပြီး ရဲစခန်းမှာ အဖမ်းခံခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်၊
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဇော်နိုင်ဦးအား ပုသိမ်မြို့မစခန်း(ပ)၇၄၂/၂ဝ၁၉၊.ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ဖြင့်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း.သိရသည်၊
Pathin Thein Than(SH)
စစ်ဆေးရေးဂိတ်မြေရှင်းရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်၊ ရာဘာကျည်ဖြင့်ပစ်ခံရ၍ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လာသည့် အမျိုးသမီး ၁ ဦး နေအိမ်ပြန်သွားသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများ ပြန်ခေါ်
မဲဆောက်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးငယ်အမှု တရားခံ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးထား